Manjaro 18.1.2 ikozvino yave kuwanikwa muXFCE, Plasma uye GNOME shanduro | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro 18.1.2 ikozvino yave kuwanikwa muXFCE, Plasma uye GNOME shanduro
Maawa mashoma apfuura, kambani ichangobva kugadzirwa yeManjaro yakavambwa Manjaro 18.1.2. Sekugovera kunoshandisa iyo Rolling Release-mhando gadziriso sisitimu, izvo zvavakaburitsa hapana chimwe kunze kwemifananidzo mitsva yeIO iyo inosanganisira ese nhau ayo anga achiverengerwa mumavhiki apfuura, anosanganisira Firefox 70 ine icon nyowani uye zvakagadziridzwa zvinhu zvakadai seLinux kernel 5.3, kernel yakaburitswa pakati paGunyana uye inoshandiswa zvakare nemamwe masisitimu anoshanda seUbuntu 19.10 Eoan Ermine.
Sezvo mukati zvimwe zvinoburitswa, yazvino vhezheni ye «Juhraya» (iyo kodhi zita) iri inowanikwa neXFCE, Plasma uye GNOME graphical nharaunda. Nezve nharaunda dzakajeka, iyo yakatora mukurumbira munaGumiguru ndeye KDE, sezvo Manjaro 18.1.2 mune yayo KDE edition yasvika nePlasma 5.17.1 yakaburitswa svondo rapfuura uye maFreyimu 5.63. Pazasi iwe une runyorwa rwemashoko akatanhamara avakaisa mukuburitswa uku.
Pfungwa dzeManjaro 18.1.2
Mune iyo KDE edition ivo vaisanganisira Plasma 5.17.1, Frameworks 5.63 uye vakagadzirisa avo KDE-Dev mapakeji kune yazvino vhezheni.
AMD FOSS Mutyairi 19.10.
Iyo nyowani vhezheni yePamac inoenderana naPamac 5.2.
Octopi yakarongedzwa nechikwata cheManjaro kuti ishande naPamac 5.2.
NVIDIA 440.2.6 mutyairi akawedzera.
Kugadzirisa kweIntel pane Xorg-Server.
Kugadziridza kwakajairika uye zvinowedzerwa zvakabatanidzwa mune mamwe akawanda mapakeji.
Vashandisi varipo vanoda kuisa Manjaro 18.1.2 vanongoda kugadzirisa yavo yekushandisa system. Sezvatatotaura, Manjaro inoshandisa Rolling Release mhando yekuvandudza system, zvinoreva kuti inoisa kamwe uye inogamuchira zvinyorwa kubva kune imwecheteyo sisitimu yehupenyu. Mifananidzo mitsva yeIO ndeyekuisa nyowani chete. Tinogona kurodha pasi iyo XFCE vhezheni kubva Iyi link, iyo yePlasma vhezheni kubva izvi uye iyo GNOME vhezheni kubva uyu mumwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Manjaro 18.1.2 ikozvino yave kuwanikwa muXFCE, Plasma uye GNOME shanduro
Tarisa kwainoti: "Pamac 5.2", inofanira kuti: "Pacman 5.2". Vaviri muPamac neOctopi